စိန်ရတနာ ကွန်ကရစ်အုတ် – Concrete Brick in Myanmar | Vootee
စိန်ရတနာ ကွန်ကရစ်အုတ် – Concrete Brick in Myanmar
စိန်ရတနာကွန်ကရစ်စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ကွန်ကရစ်အုတ်များသည် သဲနုံးကင်းစင်သော အရည်အသွေးမြင့် ရေချို၊ သဲဝါကြမ်းတို့ ကို စမ်းသပ်စမ်းဆေးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ စံချိန်မှီ အရည်အသွေးကောင်း ဘိလပ်မြေတို့ ကို အသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောစံညွှန်းကိုက်
(Standard Ratio) အချိုးအစားအတိုင်းခေတ်မီ (JS 150) Mixer ဖြင့်သမမျှတအောင် ရောစပ်ထားပါသည်။ ဖိအားမြင့်ခံ အရည်အသွေးပြည့် စံချိန်မှီအုတ်ရရှိရန် QT 8-15 (Hydraulic Type) Automatic Block Making Machine ဖြင့် ဖိခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း ပြုလုပ်၍ ဂျာမနီနည်းပညာ Control Panel ဖြင့် Standard Strength ရရှိအောင် စိန်ရတနာကွန်ကရစ်အုတ်များကို ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အုတ်အရွယ်အစားမှာ 9” x 4” x 3” (230mm x 100mm x 75mm) ဆိုဒ်ရှိပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်စွဲအလိုက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စိန်ရတနာ ကွန်ကရစ်အုတ်များကို အရေအတွက် မှန်ကန် တိကျစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း ဝယ်ယူသော ပမာဏကိုလုပ်ငန်းခွင်သို့ အချိန်မှီ ရောက်ရှိအောင် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများက သက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် အထူးဝန်ဆောင်ပေးပါသည်။
This entry was posted in Business and tagged က, ကရစ, စ, န, ရတန. Bookmark the permalink.
← Hyundai Forklift 20 DF7 in Myanmar
Nitrogen Generator in Myanmar (နိုက်ထရိုဂျင်စက်) →
Aung Thein Than Co.,Ltd - Baganmart
The Bachelor' 2015 Finale Recap: Chris Soules Is Engaged to Whitney Bischoff
Myanmar Printing Machine - HiTi Photo Printer - Mini Photo Kiosk P510K
Myanmar Furnitures- High Back Chair- Executive Chair- PU- Leather- Office Chair
Popular Petition Problem: Brazil Looks to Ethereum to Solve – Ethereum Blog January 10, 2018
Russian Bishop Castigates Cryptocurrencies: A Financial Bubble andaPonzi’ – Ethereum Blog January 10, 2018
Categories Select Category Business (1,149) Entertainment (36) Health (35) Sport (13) Technology (61) Uncategorized (4)
Archives Select Month January 2018 (12) December 2017 (40) May 2017 (109) April 2017 (44) March 2017 (100) February 2017 (79) January 2017 (46) December 2016 (46) November 2016 (35) October 2016 (32) September 2016 (84) August 2016 (51) July 2016 (51) June 2016 (58) May 2016 (11) April 2016 (1) March 2016 (22) February 2016 (19) January 2016 (56) December 2015 (23) November 2015 (1) October 2015 (71) September 2015 (59) August 2015 (42) July 2015 (45) June 2015 (3) May 2015 (1) March 2015 (136) February 2015 (10)